August 15, 2019 - Myitter
August 15, 2019 Myitter 0
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှ သောင်းကျန်သူ ၇၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ TNLAတအောင်း၊ SSAရှမ်း၊AAရခိုင်၊MNDAAကိုးကန့်၊ KIAကချင်ပူးပေါင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေကို ကြည်းတပ်ကလည်း ခြေလျင်တပ်၊ခြေမြန်တပ်၊နယ်မြေခံတပ်တွေနဲ့ နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်နေပါတယ်။ လေတပ်ကလည်း Mi35တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါ လိုက်ပစ်နေပါတယ်။ သောင်းကျန်းသူတွေက စစ်ယူနီဖောင်းမဝတ်ပါဘူး…. အရပ်သားလိုဝတ်ထားပြီး သာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲဝင်ရော ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကြတယ်…. ညအမှောင်ကို အားကိုးပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ […]
ကျွန်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှု သိန်း (၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြန့်ဝေမှုအပေါ် ကိုဘုန်း ရှင်းပြီ
ကျွန်တော်ကဗစ်တိုးရီးယားအမှု သိန်း (၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး သတင်းဖြန့်ဝေမှုအပေါ် ကိုဘုန်း ရှင်းပြီ ကျွန်တော်က သိန်း( ၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူအပေါ်ကို သတင်းအဆိပ်ကျွေးကျတယ်။ ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ မဟုတ်တာမှန်းသိလျက်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်မှုကြောင့် တိုက်ခိုက်ပြီးရေးသားတယ်… ဒါကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူတွေကို စဉ်းစားမရတာက အဲ့လောက်အယုံလွယ်သလားလို့ပါ၊ တကယ်ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါလား ခုချိန်ထောင်ထဲရောက်နေလောက်ပါပြီ ကျွန်တော်အကြောင်းက […]
အမျိုးသား အယောက် ၁သိန်း ပြည့်အောင် ကာမစပ်ယှက်မည့် ပိုလန်သူက မြန်မာသို့ ခရီးဆန့်မည်
အမျိုးသား အယောက် ၁၀၀,၀၀၀ ပြည့်အောင် ကာမစပ်ယှက်လိုသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ပိုလန်သူက ၎င်း၏အစီအစဉ်အတွက် ဥရောပနိုင်ငံများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နှင့် မြန်မာသို့ ခရီးဆက်လိုကြောင်း အော်စတေလီယန်တိုင်း သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပြော ကြားခဲ့သည်။ အင်နီယာလိုင်စကူစကာ […]
ပြင်ဦးလွှင်မှ သေဆုံးသွားသူထမင်းချက်​ဝန်းထမ်​လေးရဲ့ မိသားစု
ပြင်ဦးလွှင်မှ သေဆုံးသွားသူလေးရဲ့ မိသားစု 15.8.2019မနက်5နာရီ15မိနစ်​ခန့်် ပြင်​ဦးလွင်​မြို့ ပစ်​ခတ်​ခံခဲ့ရသူ ထမင်းချက်​ဝန်းထမ်းတစ်​ဦး​သေဆုံးပြီးနောက် မိသားစုများသနာစရာ​ကောင်းလှပါသည် သူမိဘ​တွေရင်​ကွဲရပါပြီ သေဆုံးသူက​ယောက်ျား​လေးပါ ကျန်ခဲ့တာကမိသားစုဝင်​​တွေပါ Phyu Zar Win unicode version ပွငျဦးလှငျမှ သဆေုံးသှားသူလေးရဲ့ မိသားစု 15.8.2019မနကျ5နာရီ15မိနဈ​ခနျ့ျ ပွငျ​ဦးလှငျ​မွို့ ပဈ​ခတျ​ခံခဲ့ရသူ ထမငျးခကျြ​ဝနျးထမျးတဈ​ဦး​သဆေုံးပွီးနောကျ […]
ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအလှူကအပြန် ရောက်ရောက်ချင်းညမှာပဲ အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့ မအေးသောင်း
ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအလှူကအပြန် ရောက်ရောက်ချင်းညမှာပဲ အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့ မအေးသောင်း အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အေးချမ်းတဲ့အလှတရားတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို မွန်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ စိတ်စေတနာလေးတွေနဲ့လည်း လှူဒါန်းမှုလေးတွေကို မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး အခုတစ်ခါမှာလည်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော် မအေးသောင်းလေးကတော့ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ကယ်အင်္ကျီဝတ်ကာ […]
ဗီဒီယိုခေတ်မှာအလွမ်းမင်းသမီးအဖြစ် ခေတ်စားတဲ့ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်ဟာ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ အနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်ပေမယ့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အတူ သြဂုတ်လ (၁၃)ရက်နေ့က ရွှေတောင်မြို့ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ သွားနေစဉ် ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမပေါ် မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ အုတ်ဖိုမြို့နယ် အတွင်း ရန်ကုန်- ပြည်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် […]
ပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုကို မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုကို မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် DSTA ကျောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချို မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဂုတ်တွင်းတံတားနှင့် ရဲစခန်းကိုလည်းကောင်း ပလောင် TNLA အဖွဲ့များပါဝင်သော ညီနောင် မဟာမိတ် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ယနေ့ တိုက်ခိုက်လိုက်သည်။ […]
နောက်ဆုံးရ တိုက်ပွဲသတင်း (၁၅-၈-၂၀၁၉)
နောက်ဆုံးရ တိုက်ပွဲသတင်း (၁၅-၈-၂၀၁၉) TNLAတအောင်း၊ SSAရှမ်း၊ AA ပူးပေါင်းထားတဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့က ခန့်မှန်း အင်အား ၃၅၀လောက်နဲ့ နေရာစုံက ဖြန့်တိုက်နေတာပါ။ ကွတ်ခိုင်ကတပ်တွေ ဆင်းလာပါပြီ၊ မိတ္ထီလာကို ရဟတ်ယာဉ်တွေ ရောက်ပြီ။ နာမည်ကြီး တပ်မ၉၉ကို အနီးဆုံးနေရာမှာ ချပေးမယ်ကြား ၊ ရှမ်းတဲက တိုက်လေယာဉ်တွေ […]
(TNLA)၊ (AA)၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA)အဖွဲ့တို့မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့အား တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် လျှော့တိုက်ဒုံးများကို သိမ်းဆည်းရမိ
တအာင်းအဖွဲ့(TNLA)၊ ရခိုင်အဖွဲ့(AA)၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA)အဖွဲ့တို့မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့အား တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် လျှော့တိုက်ဒုံးများကို သိမ်းဆည်းရမိ Thursday, August 15, 2019 ပြင်ဦးလွင်မြို့အား ပစ်ခတ်ရန် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့မှ စီစဉ်ထားသည့် လျှော့တိုက်ဒုံးများကို တပ်မတော်မှ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဒုံးများအား ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် ထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။ […]
ရန်ကုန် – မန္တလေး – မူဆယ် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး ရဲ့နောင်ချို မြို့နယ်နဲ့ ကျောက်မဲ မြို့ အကြားမှာရှိတဲ့ ဂုတ်တွင်းတံတားဟာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ နောင်ချိုမြို့နယ် ဒုတိယ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဌေးလင်းအောင်က အတည်ပြု ပါတယ်။ “ […]